Sualaha Had iyo Jeer Lays Weydiiyo Talaalka COVID-19 - King County
Sualaha Had iyo Jeer Lays Weydiiyo Talaalka COVID-19
Warbixinta Maarso 30, 2022: Xoojisooyinka koobaad iyo labaad
Qofkasta oo 12 jira ama ka weyn waa inuu qaato irbad xoojiso ah ee 1'aad si si buuxda loogu ilaaliyo:
5 bilood kadib irbadda labaad ee Pfizer am Moderna
2 bilood kadib hal irbad ee J&J
Xoojisooyinka 2'aad waxaa loo oggolaaday dadka:
jira 50 sano ama ka weyn
da'ooyinka 12 ama ka weyn dadkaasoo jir difaacoodu si xun ama si dhexdhexaad ah u hooseeyo.
dadka 18 jira ama ka weyn oo u qaatay J&J tallaalkoodii koobaad iyo xoojiso
Hadaad u qalanto, waxaad qaadan kartaa xoojisada 2'aad ugu yaraan 4 bilood kadib xoojisadaadii 1'aad.
Horumarinta iyo badbaadada talaalka COVID-19
1. Ma jiraa tallaalka COVID-19?
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) ayaa fasaxay isticmaalka dagdagga ee talaalka ugu horreeya ee COVID-19. Talaalo fara badan oo kale ayaa soo socda oo dhowr ka mid ahna waxay ku jiraan tijaabooyin caafimaad oo ballaaran oo ay weheliyaan tobanaan kun oo mutadawiciin ah si loo hubiyo in ay labadaba yihiin kuwo ammaan ah oo waxtar leh.
2. Waa maxay Oggolaanshaha Isticmaalka Degdegga ah?
Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) wuxuu adeegsadaa Ruqsadaha Isticmaalka Degdega ah, ee loo yaqaan EUAs, inta lagu jiro xaaladaha degdegga ah ee qaran si loogu sameeyo wax soo saar la heli karo si wax looga qabto baahi caafimaad oo degdeg ah. EUA waxay u oggolaaneysaa sheyga in la isticmaalo ka hor inta uusan haysan liisan buuxa.
EUA waxaa loo isticmaali karaa baaritaano, aalado, ama daaweyn. FDA waxay soo saartay EUAs si wax looga qabto kudka, Ebola, H1N1 iyo xaaladaha caafimaad ee kale ee degdega ah waqtiyadii lasoo dhaafay.
Tilmaamaha FDA waa in loo buuxiyaa tallaalka COVID-19 si loogu tixgeliyo EUA, oo ay ku jiraan heerarka badbaadada iyo waxtarka iyo dib u eegista khubaro caafimaad oo madax bannaan.
Haddii FDA ay ansixiso tallaalka EUA, guddi labaad oo madax-bannaan oo la-talin ayaa qiimeyn doona xogta amniga iyo waxtarka leh. Guddigan, Guddiga La-talinta ee Ku-Dhaqanka Tallaalka (ACIP), ayaa markaa sameyn doona talo bixin ku saabsan in tallaalka la adeegsanayo iyo in kale. Haddii ay ku taliyaan, ACIP waxay soo saari doontaa tilmaamo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka.
FDA iyo CDC waxay sii wadi doonaan inay kormeeraan badbaadada iyo waxtarka tallaalka xitaa kadib marka la oggolaado
3. Sidee loo soosaaray loona tijaabiyaa badbaadada iyo waxtarka tallaalka COVID-19?
Badbaadada tallaalka ayaa leh mudnaan. Dhammaan tallaalada COVID-19 waa inay maraan tijaabooyin adag iyo tallaabooyin badan oo tijaabooyin iyo qiimeyn ah ka hor inta aan loo adeegsan Mareykanka, kuwaas waxaa ka mid ah daraasado tobanaan kun oo qof ah iyo dib u eegis xog ah oo ay sameynayaan guddiyada kormeerka amniga oo madax bannaan. Waxa kaliya oo loo oggolaan doonaa ama loo oggol yahay adeegsiga haddii ay ka gudbaan heerarka amniga iyo waxtarka. Tallaallada sidoo kale waa lala socon doonaa nabadgelyadooda markii la bixiyo.
Fiidiyowgan gaaban ee ee kasocdo Waaxda caafimaadka ee WA CDC wuxuu sharxayaa wax badan oo ku saabsan sida loo sameeyo tallaallada COVID-19.
4. Sidee baa si dhakhso leh loogu soo saaray tallaalka COVID-19?
Badanaa, baaritaanka tallaalka iyo soo-saarista waxaa lagu sameeyaa dhowr, waqti badan, tallaabooyin gooni ah dhowr sano. Faafa awgeed, dowladda dhexe waxay maalgelin gaar ah siisay cilmi baarayaasha tallaalka iyo soosaarayaasha si loogu oggolaado horumarka, baaritaanka iyo wax soo saarku inay isku mar dhacaan. Ma jiraan wax talaabo ah oo laga booday laakiin jadwalka horumarka ayaa dhakhso u socon kara.
Labada tallaal ee laga oggolaaday Pfizer iyo Moderna waa tallaallada mRNA. Tikniyoolajiyadda tallaalka mRNA ayaa la darsay lagana shaqeeyay muddo tobanaan sano ah. Waxaa kordhay daneynta talaaladan maxaa yeelay waxaa lagu horumarin karaa shaybaarka iyadoo la adeegsanayo qalab si fudud loo heli karo. Tani waxay ka dhigan tahay in hawshu ay noqon karto mid la jaangooyn karo oo la kordhin karo, taasoo ka dhigaysa horumarinta tallaalka mid ka dhaqso badan hababka dhaqameed ee loo sameeyo tallaallada.
Tallaalka Johnson & Johnson waa tallaal feyraska ah ee loo yaqaan viral vector vaccine, oo ah tiknoolajiyad markii ugu horreysay la sameeyay 1970-yadii. Muddo tobanaan sano ah, boqollaal daraasadood oo cilmiyaysan oo ku saabsan tallaalka viral vector ayaa laga isticmaalay aduunka oo dhan. Waxaa loo isticmaalay cuduro kale ee faafa sida Ebola, Zika, ifilada iyo HIV.
Marka tallaal ay oggolaato EUA, mutadawiciinta qaata tallaalka COVID-19 waxaa lagula soconayaa waqti ka gaaban kan habka tallaalka dhaqanka lagu oggolaado. Tijaabinta tallaal kasta oo COVID-19 ah waxaa ku lug leh kumanaan mutadawiciin ah, ugu yaraan kalabarna mutadawiciinta ayaa lala soconayaa ugu yaraan 2 bilood ka dib qiyaasta tallaalkooda ugu dambeeya (halkii laga isticmaali lahaa 6 ama ka badan bilood ee nidaamka caadiga ah). Si kastaba ha noqotee, laba bilood, dhibaatooyinka ugu badan ee tallaallada ayaa la filayaa inay soo baxaan.
Waa macquul in waxyeelo dhif iyo naadir ah ah la arko kaliya marka malaayiin qof la tallaalo. Sababtaas awgeed, badqabka tallaalada COVID-19 waa la sii ilaalin doonaa ka dib marka la bixiyo.
5. Ma la heli karaa talaalka the Johnson & Johnson?
Haa. Laga bilaabo Abriil 24, 2021, dadka qaangaarka ah ee jira 18 iyo wixii ka weyn ayaa heli kara tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 ka dib markii CDC iyo FDA ay dhammaystireen dib u eegista amniga ee w talaalka. (Websaydhkan waa ingiriis keliya)
J&J tallaalkiisu waxuu leeyahay khatar hoose oo khalkhal xinjirow dhiig daran ah, khaasatan haweenka ka yar da'da 50. Tallaadada Pfizer iyo Moderna ma leh khatartaas, oo waa lagu taliyey (Boga webseytku waa English oo qura) intii la qaadan lahaa J&J dhamaan tallaalka hore amase kan baritaarka ah.
Haddii aad hesho tallaalka J&J, u fiirso astaamahan saddex toddobaad markaad qaadatid tallaalka:
Madax xanuun joogra ah ah ama araga oo xumaada.
Neefta oo kugu yaraata.
Lugaha oo ku barara.
Calool xanuun joogra ah.
Nabarro fudud ama dhibco dhiig oo yaryar lagu arko maqaarka hoostiisa.
Raadso daryeel caafimaad isla markiiba haddii aad isku aragto mid ama inbadan oo astaamahan ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad qaadatay tallaalka in ka badan bil ka hor, halistaadu aad ayey u yar tahay. Waa caadi in la yeesho astaamo yaryar ama dhexdhexaad ah, oo ay ku jiraan qandho, madax xanuun, daal, iyo kalagoys / murqo xanuun inta lagu jiro usbuuca ugu horeeya kadib markaa qaadarid talaalka COVID-19 ah.
Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid, wac takhtarkaaga, kalkaalisada caafimaadka, ama rugta caafimaadka. CDC iyo FDA waxay sii wadi doonaan inay kormeeraan amaanka dhamaan talaalada COVID-19, iyo Caafimaadka Dadweynaha ayaa bixin doonta wixii soo cusboonaada oo macluumaad dheeri ah marka la helo.
6. Ma waxaa jira xiriir ka dhexeeya wadne-bararka (myocarditis) iyo tallaallada mRNA? Khatar intee le'eg weeye?
Kooxda badbaadada tallaalka ee CDC waxay ogaatay cilaaqo suuragal oo ka dhexeysa tallaallada mRNA (sida Moderna iyo Pfizer) iyo wadne-bararka oo laga helay qaangaarka iyo dadka dhallinyarada ah. Wadne-bararku (myocarditis) waa barar ku dhaca murqaha wadnaha.
Wararka wadne-bararka iyo bararka xuubka murqaha wadnaha (pericarditis) waa naadir, markii loo fiirsho boqolaalka milyan ee irbadaha tallaalka la bixiyay. Calaamadaha inta badan waxay soo muuqdaan todobo beri gudahooda kadib irbadda labaad kiisaskuna inta badan waxay ku dheceen wiilasha qaangaarkaa iyo dadka dhallinyarada ee da'da 16 ama ka weyn. Bukaannada ugu badan ee wadne-bararku ku dhacay kadib tallaalka waxay si fiican ugu roonaadeen daaweynta iyo nasiino oo dhaqso bey u fiicnaadeen.
Khatarta wadne-bararka wey hooseysaa markii la barbardhigo faaiidooyinka tallaalka. Tallaalku wuxuu muujiyay ka hortagga kiisaska COVID-19, isbitaal jiifinta iyo dhimashooyinka. Tallaalku wuxuu sidookale bixiyaa difaac ka dhan ah jirro barar calaamado badan leh ee lagu arko caruurta iyo dadka waaweyn, calaamado muddo-dheer jira ("long-haul Covid"), iyo ka hortagga caabuqyada khatarta badan ee cusub. Khatarta xanuunnadaan ayaa aad uga sarreysa khatarta wadne-bararka ee laga qaado tallaalka.
Walow wadne-bararku uu naadir yahay, hadana CDC waxay ku talisaa dadka dhawaan la tallaalay in ay iska eegaan wax ka mid ah calaamadaha soo socda kadib qaadashada tallaalka:
Xabad xanuun (shaf xanuun)
Neef-ku -dhegis (neefsasho dhib leh)
Dareemo wadne garaac, babbasho, ama dhaqso u garaacmaya
Raadso daryeel caafimaad haddii aad dareentid mid ka mid ah calaamadahaan.
7. Tallaalka COVID-19 miyuu kaa dhigayaa mid magnetic ah?
Maya, tallaalka COVID-19 kuma siin karo waxyaalo magnetic ah, oo ay ku jiraan goobta tallaalka (gacantaada).
Waxba kuma jiraan tallaallada soo saari kara aaladda elektromagnetic. Dhammaan tallaallada COVID-19 ma lahan wax bir ah sida birta, nikkel, kobal, lithium, iyo aalado dhif iyo naadir ah. Sidoo kale ma haystaan wax soo saar la soo saaray sida microelectronics, electrodes, nanotubes carbon, ama nanowire semiconductors.
Ka eeg liistada dhammaystiran ee ka kooban tallaallada COVID-19 qaybta hoose sida ay u shaqayso tallaalka COVID-19.
8. Sideen ku ogaan karaa haddii macluumaadka aan ka arko internetka ee ku saabsan tallaalka COVID-19 in ay run yihiin ama ay khaldan yihiin?
Fiidiyowgaan oo ka socda Waaxda Caafimaadka WA [Muuqaalkani waa Ingiriis] wuxuu bixiyaa talooyin ku saabsan si loo tixgeliyo codka, qoraaga, iyo ilaha markaad aragto macluumaad cusub, iyo inaad iska hubiso dadka aad taqaan. Caafimaadka Dadweynaha ayaa sidoo kale soo saaray ilo la yiraahdo Ma Runbaa? si looga wada hadlo macluumaad khaldan oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
Sidee talaalka COVID-19 u shaqeeyaa
1. Sidee ayuu u shaqeeyaa tallaalka COVID-19?
Talaalada COVID-19 waxuu ka caawinaya jirkeenna inay yeeshaan difaac ka dhan ah fayraska sababa COVID-19 iyadoon la is qaadsiin cudurka. Markii aad qaadatid tallaalka, habkaaga difaaca ayaa sameeya unugyada ee la dagaallanka infekshinka ee ku sii jiraya dhiiggaaga oo kaa difaacaya haddii aad qabtid fayraska.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Gobolka Washington qaybinta talaalka COVID-19.
2. Waa maxay faa iidada helitaanka tallaalka COVID-19?
Tallaalka COVID-19 ayaa kaa caawin doona inaad ku xanuunsato ama aad ugu xanuunsato COVID-19.
Waxay kaa caawineysaa inaad ku difaacdo adiga oo baraya habka difaaca jirka si aad ula dagaallanto fayraska adigoon la kulmin infekshinka COVID-19.
Tijaabooyinka kiliinikada, talaalada COVID-19 ee hada la heli karo ayaa lagu ogaaday inay yihiin kuwo si aad ah waxtar ugu leh ka ilaalinta dadka COVID-19.
Tallaalka COVID-19 wuxuu noqon doonaa aalad muhiim ah oo ka caawisa joojinta aafada.
Qaadashada tallaalku waxay kaa caawin doontaa inaad adigu ka ilaaliso, saaxiibbadaada iyo qoyskaaga, iyo dadka kale ee bulshada ka tirsan caabuqa COVID-19. Isku darka tallaalka iyo raacitaanka talooyinka caafimaadka bulshada ayaa ku siin doona kahortagga ugu fiican COVID-19 ee waqtigaan.
Xirashada waji-furka iyo kala fogaanshaha bulshada ayaa kaa caawinaya yareynta fursadda aad ugu dhowaan karto fayraska ama aad ugu gudbin karto dadka kale, laakiin tallaabooyinkan oo keliya kuma filna. Tallaalku wuxuu la shaqeyn doonaa nidaamkaaga difaaca sidaa darteed waxay diyaar u noqon doontaa inay la dagaallanto fayraska haddii aad qaaddo.
Waqti ka dib, maadaama dad badan la tallaalay, waxaa laga yaabaa inaan mar dambe u baahnayn qaar ka mid ah tallaabooyinka kale ee ka hortagga COVID-19 ee lagama maarmaanka u ah xilligan.
3. Tallaalka COVID-19 miyuu kugu qaadsiiyaa fayraska COVID-19 ama ma kuu keenaa infekshinka COVID-19?
Maya, tallaallada COVID-19 ma sababi karaan infekshinka COVID-19. Tallaallada COVID-19 waxay jirkeena baraan inay na ilaaliyaan iyagoo samaynaya unugyada difaaca jirka iyo unugyada kale ee la dagaallanka infekshinka Talaalku wuxuu barayaa unugyada jirkeena inay sameeyaan borotiin u eg sida midka laga helay dusha sare ee fayraska COVID-19. Si loo bixiyo tilmaamaha, tallaalku wuxuu adeegsadaa midkood RNA messenger (mRNA) ama virus kale oo aan dhib lahayn oo wax laga beddelo si uusan cudur u keeni karin. Jirkeenu wuxuu bartaa inuu aqoonsado borotiinkaas si ay kor ugu qaadaan jawaab celinta difaaca jirka haddii fayraska COVID-19 uu soo galo jirka.
Waa suurtagal in lagaa helo waxyeelo sida madax xanuun, cudud xanuun, daal ama qandho maalinta ama laba ka dib tallaalka. Laakiin dhibaatooyinkaas soo raaca waa muddo gaaban waana astaamo muujinaya in tallaalku jirka ka dhisayo difaac. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaan soo raaca waxay la mid noqon karaan astaamaha COVID-19, laakiin lama mid aha infekshinka. Tallaalku kuma jiro fayras ama qayb ka mid ah fayraska mana keeni karo COVID-19.
4. Sidee ayuu shaqeeyaan talaalada Moderna iyo Pfizer?
Tallaalada loo oggolaaday Pfizer iyo Moderna waa tallaallada mRNA. Tikniyoolajiyadda tallaalka mRNA ayaa la darsay lagana shaqeeynayey muddo tobanaan sano ah.
Ma jiro wax fayras ah oo ku jira talaalada mRNA, markaa kama qaadi kartid infekshinka talaalka COVID-19. Taa badalkeed, talaalada mRNA waxay unugyadayada siiyaan tilmaamo si ay u sameeyaan borotiin aan dhib lahayn — mid u eg borotiin muhiim ah oo kujira fayraska COVID-19. Marka unugyadaadu sameeyaan borotiinkaas, jirkaaga wuxuu abuuraa jawaab-celin xoog leh iyo difaaca jirka si looga ilaaliyo COVID-19. Jirkaaga ayaa baranaya sida looga difaaco inaad qaadsiiso cudurka adiga oo aan u gudbin fayraska.
Ka dib markii mRNA ay barto unugyadeena inay ka difaacaan COVID-19, enzymes-ka jidhkeena ayaa si dhakhso leh u jajabaya una baabi'inaya mRNA. mRNA ma gasho xudunta unugyadeena, DNA, ama walxaha hidaha.
In kasta oo kuwani ay yihiin talaalkii ugu horreeyay ee mRNA ee loo oggol yahay in la adeegsado, mrnolojiyada mRNA waxaa la darsay in ka badan 30 sano. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida tallaalada mRNA u shaqeeyaan waxaa laga heli karaa bogga internetka ee CDC.
5. Miyaan ubaahanahay qiyaasta labaad ee talaalada Moderna ama Pfizer?
Haa, hubi inaad hesho qiyaastaada labaad ee tallaalka taxanaha ah ee Moderna ama Pfizer. Qiyaasta labaad la'aanteed, laguuma tixgelinayo inaad si buuxda isu tallaashay.
Waxaan maqalnay in dadka qaarkiis in ay qorsheenayaan inay aysan qaadanin talaalka labaad maxaa yeelay waxay ka walwalayaan waxyeellooyin soo raaca oo suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, qaadashada talaalka labaad waa muhiim si ay ku siiso difaac buuxa- talaalka ugu horeeya wuxu bilaabaya dhisida difaaca iyo talaalka labaadna wuu sii xoojineya.
Ma aha in qof kastaa waxyeellooyin ku yeesho talaalka labaad, dadka qaarkoodna waxay leeyihiin waxyeellooyin ka fudud kuwa kale. Haddii aad leedahay waxyeelo, waxay u badan tahay inaysan sii socon doonin wax ka badan dhowr maalmood. Kuwaani dhammaantood waa calaamado muujinaya in tallaalku shaqeynayo, jirkaaguna wuxuu dhisayaa difaac. Marka unugyadaadu sameeyaan borotiinkaas, jirkaaga wuxuu abuuraa jawaab celin difaac oo xoog leh si looga hortago COVID-19. Jirkaagu wuxuu baranayaa sida looga ilaaliyo inaad qaado cudurka 'COVID-19' adiga oo aan ku soo gaarin fayraska dhabta ah ee loo yaqaan 'coronavirus'.
Tallaalka noocan ah kuma qaadsiin karo COVID-19 ama fayraska hargabka ee caadiga ah ee aan waxyeellada lahayn ee loo isticmaalo in lagu bixiyey tilmaamaha. Tallaalku ma galo ama beddelo xuddunta unugyadayada, DNA, ama hiddo-wadaha.
Saynisyahannadu waxay billaabeen inay abuuraan vector faayrasyo 1970-yadii. Muddo tobanaan sano ah, boqollaal daraasadood oo cilmiyaysan oo ku saabsan tallaalka viral vector ayaa laga isticmaalay adduunka oo dhan. Waxaa loo isticmaalay cudurada kale ee faafa sida Ebola, Zika, ifilada iyo HIV.
6. Sidee buu u shaqeeyaa tallaalka Johnson & Johnson?
Tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 wuxuu u isticmaalaa foom aan waxyeello u lahayn fayraska caadiga ah ee qabow (oo aan ahayn coronavirus) kaas oo wax laga beddelay si uusan kuu bukin karin. Fayraskan aan waxyeellada lahayn wuxuu bixiyaa tilmaamo lagu barayo unugyadeena sameynta borotiin laga helo dusha sare ee coronavirus. Marka unugyadaadu sameeyaan borotiinkaas, jirkaaga wuxuu abuuraa jawaab celin difaac oo xoog leh si looga hortago COVID-19. Jidhkaagu wuxuu baranayaa sida lagaa ilaaliyo inaad ku dhacdo cudurka 'COVID-19' adiga oo aan u soo gaadhin fayraska dhabta ah ee loo yaqaan 'coronavirus'.
Tallaalka noocan ah kuma qaadsiin karo COVID-19 ama fayraska hargabka ee caadiga ah ee aan waxyeellada lahayn ee loo isticmaalo in lagu bixiyo tilmaamaha. Tallaalku ma galo ama beddelo xuddunta unugyadayada, DNA, ama hiddo-wadaha.
Saynisyahannadu waxay billaabeen inay abuuraan vector faayrasyo 1970-yadii. Muddo tobanaan sano ah, boqollaal daraasadood oo cilmiyaysan oo ku saabsan tallaalka fayraska fayraska ayaa laga sameeyay adduunka oo dhan. Waxaa loo isticmaalay cudurada kale ee faafa sida Ebola, Zika, ifilada iyo HIV.
Haweenka ka yar 50 sano waa inay ka feejignaadaan halista xaalad aad u dhif ah laakiin halis ah oo ku lug leh xinjirowga dhiigga iyo hoos u dhac ku yimaada tirinta 'platelet'. Tallaadada Pfizer iyo Moderna ma leh khatartaas, oo waa lagu taliyey (Boga webseytku waa English oo qura) intii la qaadan lahaa J&J dhamaan tallaalka hore amase kan baritaarka ah. Fadlan eeg su'aasha ah "Tallaalka Johnson & Johnson ma la heli karaa in la isticmaalo?" wixii macluumaad dheeraad ah.
7. Yaa qaadan kara cirbadda xoojinta ee tallaalka COVID-19?
Qofkasta oo 12 sano jira ama ka weyn waxaa habboon inuu qaato irbad xoojin. Hadaad u qalantid irbad xoojin, waxaad qaadan kartaa irbaddaada:
5 bilood laga joogo markii ay qaateen cirbadda labaad Pfizer ama Moderna (Ogow: 5-17 sano jirku waxuu qaadan karaa Pfizer oo keliya.
2 libood laga jooogo markii ay qaateen halka cirbad ee Johnson & Johnson (J&J)
Waxaad u dooran kartaa tallaal kale xoojiyehaaga haddii aad rabto nooc ka duwan (tusaale, helidda xoojisay Pfizer tallaalka Moderna ka dib, ama xoojiye Moderna ka dib marka qaadatay tallaalka J&J). Tallaalka J&J waxa uu leeyahay khatar yar oo ah khalkhal xinjiro dhiig oo halis ah, gaar ahaan dumarka da'doodu ka yar tahay 50 jir. Tallaadada Pfizer iyo Moderna ma leh khatartaas, oo waa lagu taliyey (Boga webseytku waa English oo qura) intii la qaadan lahaa J&J dhamaan tallaalka hore amase kan baritaarka ah.
Difaaca Ka-hortagga cirbadaha ugu horeeyayayaa ayaa hoos u dhacaya waqti ka dib. Xoojiyaha waxay kor u qaadaysaa difaaca waxayna kordhisaa ilaalinta. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka waaweyn ee (50 iyo ka weyn) iyo dadka kale ee khatarta sare leh ee leh xaalado caafimaad oo hoose ama ka shaqeenaayo ama dagan goobta khatarta sare leh s togoobta qalabka sare si loo helo difaac dheeraad ah oo lago helo xoojiyaha tallaalka.
8. Xoojiyaha ma wuxuu noqonayaa sidii tallaalkii hore aan qaatay?
Tallaalka xoojiyeyaasha ah ayaa laga sameeyay isla nooca tallaalka ee tallaalada koowaad iyo labaad.
FDA iyo CDC waxay si foojignaan leh u eegeen xogta ku saabsan sida wanaagsan ee ay tallaaladu u ilaalinayeen dadka waqti dheer ka dib, si loo go'aamiyo inta tallaalku ku jiro tallaalada xoojinaya. Tallaalka xoojiyayaasha ee Pfizer iyo Johnson & Johnson waxay leeyihiin qiyaas la mid ah ta tallaalada hore. Tallaalka xoojiyaha Moderna waxa uu leeyahay kala badh qaddarka tallaalka sida tallaalada Moderna ee bilowga ah.
9. Waa kuwee maaddooyinka ku jira tallaalka COVID?
Maaddada muhiimka ah ee tallaalka Johnson & Johnson waa adenovirus 26, oo ah fayras aan waxyeello lahayn oo loo isticmaalo in lagu geeyo borotiinka in uu kor u kaca ee korka coronavirus ku leh unugyadayada. Unugyada ayaa markaa aqoonsan kara COVID-19 waxayna kaa difaaci karaan infekshinka. Tallaalka J&J sidoo kale wuxuu ka kooban yahay liin dhanaanta iyo ethanol.
Tallaallada kuma jiraan: waxyaabaha doofaarka, ukunta, cinjirka, waxyaabaha dhiigga laga helo, unugyada fayraska ee COVID-19, meerkuri, ama microchips. Tallaallada kuma jiraan unugyada uurjiifka.
Liiska buuxa ee maaddooyinka ku jira tallaalka Pfizer, oo laga heli karo FDA:
Waxyaabaha Dheeraadka ah (Cusbada, Sonkorta, keydadka)
Liiska buuxa ee maaddooyinka ku jira tallaalka Moderna, oo laga heli karo FDA:
Liiska oo dhan ee maaddooyinka ku jira tallaalka Johnson & Johnson (Janssen),oo laga heli karo FDA:
recombinant, taranka-karti la'aan adenovirus nooca 26 oo muujinaya borotiinka 'SARS-CoV-2'
Maaddooyinka aan firfircooneyn
10. Waa maxay caabuqa Delta? Ma u baahanahay inaan sameeyo wax ka duwan wixii hore si aan naftayda u ilaaliyo?
Caabuqa Delta waa mid ka mid ah lixda feyraska Karoona "noocyada walaaca leh" ee gudaha Mareykanka, kaasoo aad u faafi-og oo u badantahay inuu noqdo nooca ugu caansan ee feyraska Karoona ee wadanka. Sida ugu fiican ee aad naftaada iyo bulshadaada uga ilaalin karto caabuqa Delata waa qaadashada tallaalka si buuxda—adigoo hubinaya inaad qaadato labada irbadood hadaad heli Pfizer ama Moderna.
Khatarta ugu weyn ee caabudyada feyraska Karoona waxay ku wajahantahay dadka aan is-tallaalin. Haddii aadan si buuxda u tallaalneyn, waxaa naftaada iyo dadka kale ku ilaalin kartaa sii wadista xirashada maaskaro, kala-fogaanshaha jireed, iyo is-baarista si dhaqsaa kadib calaamadaha COVID-19 ama la-kulanka qof qaba.
U -qalmitaanka tallaalka iyo helitaanka
1. Goorma ayaan heli karaa tallaalka COVID-19?
Qof kasta oo jira 5 sano ama ka weyn wuxuu xaq u leeyahay tallaalka COVID-19.
Baro wax badan oo ku saabsan sida la isu tallaalo.
Wax badan ka baro oo ku saabsan qaybinta tallaalka 'COVID-19' ee Gobolka Washington.
2. Waan uqalmaa Xagee laga talaali karaa?
Tallaallada COVID-19 waxaa loo qeybinayaa isbitaalada, farmashiyaasha, goobaha mugga weyn leh, xarumaha caafimaadka bulshada iyo bixiyeyaasha kale. Halkan ka baro wax badan oo ku saabsan halka laga helo tallaalo King County.
3. Ma dooran karaa tallaalka COVID-19 ee aan qaato?
Qaar ka mid ah bixiyeyaasha tallaalka waxay ku qoraan nooca tallaalka ee laga heli karo goobahooda diiwaangelinta ee internetka ama waxay ku bixin karaan macluumaadkaas taleefanka. Dhammaan tallaallada loo oggolaaday adeegsiga waxay ka hortagi doonaan isbitaal dhigidda iyo dhimashada COVID-19. Dhammaan tallaallada waa kuwo ammaan ah oo waxtar badan leh. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshaha muhiimka ah waa:
U-qalmitaanka da'da: Tallaalka Pfizer waxaa hadda la siin karaa dadka jira 5 iyo wixii ka weyn. Tallaalada Moderna iyo Johnson & Johnson waxaa la siin karaa dadka jira 18 iyo wixii ka weyn.
Tirada qiyaasaha: tallaalka Johnson & Johnson wuxuu u baahan yahay keliya hal talaal. Laba qaadasho ayaa lagama maarmaan u ah tallaalka Pfizer (ugu yaraan 3 usbuuc waa in ay u dhexeysa) iyo tallaalka Moderna (ugu yaraan 4 usbuuc waa in ay u dhexeysa).
Goobaha kala duwan ee talaal bixiyaasha waxay yeelan karaan tallaallo kala duwan markay soo baxaan ama la heli karo. Sahayda tallaalku way is beddeli kartaa, sidaa darteed nooca tallaalka ee talaal bixiyahu uu qaato sidoo kale wuu is beddeli karaa.
4. Dadka uurka leh ama naaska nuujinaya ma in la tallaalaa?
Kulliyadda Maraykanka ee Dhakhaatiirta Haweenka iyo CDC waxay kugula talinayaan inaad qaadato tallaalka COVID-19 haddii aad uur leedahay, isku dayeyso inaad uur yeelato, ama aad naas nuujiso. Qaadashada tallaalku waxay caawin kartaa adiga iyo ilmahaagaba.
Dadka uurka leh waxay leeyihiin halis sare inay qaadan cudarka nooca daran ee COVID-19, Nooca cusubna oo aadka u faafa ee Delta ayaa ka dhigaya arin deg deg ah.
Tallaalladu aad bay waxtar ugu leeyihiin ka-hortagga cudurka COVID-19, jirro daran, iyo dhimasho, waxaana laga yaabaa in fa'iidadaas loo sii gudbiyo ilmahaaga markuu korayo.
Xog aad u badan oo sii kordheysa ayaa xaqiijinaysa in tallaallada COVID-19 ay ammaan yihiin inta uu qofka uurka leeyahay. Ma jiraan wax caddayn ah oo muujinaya in qaadashada tallaalku ay kordhiso halista aad ilamaha ku qaadi wayso amase aad dhiciso. Haddii aad su'aalo qabtid, la hadal dhakhtarkaaga.
5. Waxaan qaatay tallaalkeygii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 ee caalamiga ah. Maxaan ku sameeyaa tallaalkeyga labaad haddii aan joogo Mareykanka laakiin tallaalkii ugu horreeyay ee aan qaato halkan laguma sharci galin?
Hadda ma hayno macluumaad ku saabsan badbaadada ama waxtarka helitaanka tallaalka COVID-19 ee laga oggolaaday Mareykanka ka dib markii aad kusoo qaadatay tallaal aanu sharciyeen hay’ada FDA meel kale.
Si kastaba ha ahaatee, dadka helay tallaal aan hadda laga oggolaan Mareykanka waxaa dib loogu tallaali karaa tallaalka ay sharciyeysay hey’ada FDA ee xaaladaha soo socda:
Tallaallada COVID-19 ee loo oggolyahay isticmaalka degdegga ah ee ay bixiso WHO
Dadka wada qaatay taxanaha tallaalka 'COVID-19' oo ay wataan tallaal loo oggolaaday in si deg deg ah ay u adeegsadaan Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) uma baahna wax dheeraad oo tallaal ay ogashahay hey’ada FDA-ee loogu talagalay COVID-19.
Dadka qayb ahaan loo tallaalay taxanaha tallaalka 'COVID-19' ee loo oggol yahay adeegsiga degdegga ah ee WHO waxaa la siin karaa taxane tallaal ah oo ay ansixisay hey’ada FDA oo loo yaqaan 'COVID-19'.
Tallaallada COVID-19 ee aan laga oggolaanin FDA ama aan loo oggolaan adeegsiga degdegga ah ee WHO
Dadka dhammeystiray ama qayb ahaan qaatay taxanaha tallaalka 'COVID-19' oo ay la socdaan tallaal aan oggolaansho ka haysan FDA ama aan loo fasaxin adeegsiga deg-degga ah ee WHO waxaa loo soo bandhigi karaa taxane tallaal ah oo ay hey’ada FDA-oggolaatay oo ah COVID-19.
Waa inaad sugtaa ugu yaraan 28 maalmood laga soo bilaabo markii aad qaadatay tallaalka wadanka dibidiisa si aad u hesho tallaal ay oggolaatay hey’ada FDA oo loo yaqaan 'COVID-19'.
Maxaa la filan karaa
1. Waa imisa kharashka tallaalka COVID-19?
Ma jiro wax kharash ah oo ku baxa tallaalka COVID-19, iyadoon loo eegin soogalootiga ama xaaladda caymiska caafimaadka. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkana waxaa lagu dabooli doonaa dadka aan caymiska ku jirin.
Talaal bixiyaasha COVID-19 ma:
Kugu ma soo dalaci doono tallaalka
Si toos ah kuuguma soo dallaci doono wixii khidmad ah ee maamul, lacag bixinno ah, ama caymis
U diid karaan tallaalka qof kasta oo aan lahayn caymiska caafimaadka, aan caymis ku jirin, ama ka baxsan shabakadda
Kuu dalab booqasho xafiis ama khidmad kale qaataha haddii adeegga kaliya ee la bixiyo uu yahay tallaalka COVID-19
Ubaahan adeegyo dheeri ah si qofku u helo tallaalka COVID-19; si kastaba ha noqotee, adeegyo daryeel caafimaad oo dheeri ah ayaa la bixin karaa isla markaa isla markaana biil loogu bixin karaa sida ugu habboon
Talaal bixiyaasha COVID-19 waxay:
Ka dalban karaan magdhow ku habboon qorshaha ama barnaamijka ceymiska qofka (tusaale: caymiska caafimaadka gaarka loo leeyahay, Medicare, Medicaid) ee khidmadda maamulka tallaalka. Si kastaba ha noqotee, adeeg-bixiyeyaashu kuma soo dallaci karaan tallaal qaata dheelitirka biilka.
Ka raadsan lacag-celinta dadka qaata tallaalka aan caymiska lahayn ee Barnaamijka Caymiska Caafimaadka iyo Adeegyada ee COVID-19 Barnaamijka Caymiska.
Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County iyo kuwa kaleba waxay bixiyaan xarumo caafimaad oo tallaal oo bilaash ah. Qeybinta sinaanta ayaa mudnaan u leh rugahan caafimaad. Macluumaad dheeri ah waxaa laga heli karaa boggayaga Tallaalka ee Degmada King County.
2. Goormaan qaataa irbada labaad ee Pfizer ama Moderna?
Aad bay muhiim u tahay in la helo irbada labaad ee tallaalka. Irbada koowaad waxay bilowdaa dhiirigalinta (kicinta) difaaca jidhkaaga, irbada labaad (qiyaasta labaadna) waxay gaadhsiisaa heer adag oo ka hortag ah oo ka dhan ah COVID-daran.
Dadka qaatay Pfizer = 3 toddobaad kadib qiyaastaada kowaad
Dadka qaatay Moderna = 4 toddobaad kadib qiyaastaada kowaad
Haddii aad tahay 12 jir iyo ka yar, ama u nugul cudurada (difaacaagu hooseeyo), 65 jir ah ama ka weyn, waa inaad raacdaa jadwalkan
Cilmi-baaristii u dambaysay waxay muujisay inay caadi tahay dadka qaarkii ee ka weyn 12 inay sugaan ilaa 8 toddobaad si ay u helaan irbadooda labaad. Waxaa laga yaabaa inay dhisto jawaab celin difaac oo xooggan haddii aad sugto in ka badan 3 ilaa 4 toddobaad. Si kastaba ha noqotee, difaacaaga xooggan waxuu hoos u dhacaysaa muddadaas 8 toddobaad kadib. Haddii aad su'aalo qabto, fadlan weydii bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga.
3. Waa maxay waxyeelooyinka guud ee la soo sheegay?
Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yeeshaan calaamado qaarkood sida madax xanuun, cudud xanuun, daal, qandho, ama murqo xanuun dhawr maalmood maalin ama wixii ka dambeeya tallaalka. Calaamadahaani waa kuwa ugu badan ka dib qiyaasta labaad ee tallaalka. Kuwani dhammaantood waa calaamado muujinaya in habka difaaca jirka uu dhisayo difaac. Tani waa wax iska caadi ah oo sidoo kale waa la arki karaa kadib talaalada kale ee sida caadiga ah loo isticmaalo.
4. Anaphylaxis miyuu saameyn guud ku yahay tallaalka COVID-19?
Anaphylaxis - oo ah xasaasiyad daran - aad ayey u yar tahay ka dib qaadashada tallaalka COVID-19. Qof kasta oo la soo dersay Anaphylaxis ka dib tallaalka COVID-19 si buuxda ayuu u bogsaday, iyadoo lagu saleynayo macluumaadka la heli karo mana jirto wax dhimasho ah oo dhacday. Halista jirro daran iyo geeri ka timaadda COVID-19 aad ayey uga weyn tahay halista ah in lagu arko Anaphylaxis ama falcelin kale oo daran tallaalka ka dib.
CDC waxay daabacday warbixinno ay kujiraan macluumaad dheeri ah oo kusaabsan Anaphylaxis iyo xasaasiyadaha kale ee talaalka:
Dareen-celinta xasaasiyadda, oo ay ku jirto Anaphylaxis ee tallaalka Moderna COVID-19
Dareen-celinta xasaasiyadda, oo ay ku jirto Anaphylaxis ee tallaalka Pfizer COVID-19
Waxay kuxirantahay talaalka aad qaadaneyso. Tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 wuxuu u baahan yahay oo keliya hal durniin qaadasho oo ah difaac dhammaystiran. Tallaalada Pfizer iyo Moderna waxay u baahan yihiin laba qaadasho, hal talaal si ay u bilaabaan ilaalinta dhismaha iyo tallaalka labaad oo ah in la kordhiyo lana dhammaystiro difaaca.
Talaalkaaga labaad waa in la siiyaa 21 ama 28 maalmood kadib talaalka hore, iyadoo kuxiran nooca talaalka. Waxaad u baahan doontaa inaad hesho tallaal isku mid ah labada tallaal. Markaad hesho tallaalka kuugu horreeya, takhtarkaaga tallaalka ayaa ku siin doona macluumaad haddii aad u baahan tahay qiyaas labaad iyo goorta aad qaadanaysid.
Dadka intiisa badan ee la kulmay anaphylaxis waxay ku soo if baxeen calaamado 15 daqiiqo gudahood markii la tallaalay. Bukaanadan oo dhan waxaa lagu daaweeyay epinephrine isla markii ay muujiyeen astaamo.
Dhammaan goobaha tallaalku waxay leeyihiin xirfadlayaal caafimaad oo loo tababbaray inay aqoonsadaan oo ay ka jawaabaan anaphylaxis. Waxay kormeeraan qof kasta oo qaata tallaalka COVID-19 muddo 15 daqiiqo ah tallaalka ka dib si ay u caawiyaan haddii loo baahdo.
5. Hadda waan is tallaalay oo waxaan qabaa dhibaatooyin soo raaca oo la mid ah COVID-19. Miyay tahay inaan guriga joogo?
Waad ku laaban kartaa shaqada mana karantiil kartid dhawr maalmood gudahood tallaalka la qaatay, HADDII:
Kama aadan xiriirin qof qaba COVID-19 IYO
Waxaad dareentay fiicnaan inaad diyaar u tahay inaad qabato howlo caadi ah sida shaqo IYO
Qandho aadan qabin IYO
Calaamadaha iyo astaamuhu waxay ku egyihiin oo keliya kuwa la arkay kadib tallaalka COVID-19 (oo halkan ku taxan, oo ay ku jiraan xanuun, barar, daal, dhaxan, madax xanuun) IYO
Ma lihid calaamado iyo astaamo kale oo ah COVID-19, sida qufac, neef-qabad, cuna-xanuun, ama urka ama dhadhanka oo is beddela.
CDC: Tixraacyada Tixgelinta Talaalka ee Shaqaalaha Daryeelka Caafimaadka
CDC: Boostada Tixgalinta Talaalka ee Dadka Degan Daryeelka Muddada Dheer
6. Maxay yihiin ilaha jira ee i caawin kara ka dib markii la igu tallaalo?
CDC waxay abuurtay V-safe, qalab bilaash ah, casriga ku saleysan taleefannada casriga ah oo adeegsada farriimaha qoraalka iyo sahaminta websaydhka si loo bixiyo baaritaanno caafimaad oo shakhsi ahaaneed ka dib markaad hesho tallaalka COVID-19. V-safe ayaa sidoo kale ku xusuusinaysa inaad hesho qiyaastaada labaad. Waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad kaqeyb gasho V-safe. Wax dheeri ah baro: www.cdc.gov/vsafe
7. Miyaan iska hubin doonaa COVID-19 kadib markaan qaato tallaalka?
Tallaallada COVID-19 ayaan kuu horseedin doonin inaad si togan uga soo baarto baaritaannada fayraska ee loo isticmaalo in lagu ogaado infekshinka hadda jira.
Baaritaanka unugyada jirka waxaa laga raadsadaa unugyada difaaca jirka ee dhiigga ku jira oo tilmaamaya inuu qofku qabo jeermis ama jeermis. Antibodies sidoo kale waa la soo saaraa markii qof uu helo tallaal wax ku ool ah. Haddii jirkaaga uu yeesho jawaab ka hortag ah tallaalka COVID-19, waxaa suurtagal ah inaad ku tijaabiso qaar ka mid ah baaritaannada antibody ee COVID-19.
8. Miyay dadka qaaday COVID-19 ay qaataan tallaalka?
Haa, waa in lagaa talaalaa iyadoo aan loo eegin inaad horey u qaadatay COVID-19. Khubaradu wali ma oga inta aad ka ilaalishanthay inaad markale xanuunsato ka dib markii aad ka bogsatay COVID-19. Xitaa haddii aad horay uga bogsatay COVID-19, waxaa suurtagal ah inuu markale kugu dhici karo fayraska sababa COVID-19.
Waa inaad is tallaashaa ka dib marka muddada karantiilka ay dhamaato muddada karantiilka ay dhammaato iyo adigoo dareemeynin calaamado daran. Uma baahnid in mar kale lagaa baaro caabuqa COVID-19 ka hor intaadan raadin talaal.
Haddii lagaa daaweeyay COVID-19 oo leh unugyada unugyada jirka ku dhaca ee monoclonal ama qanjirka 'plasma', waa inaad sugtaa ilaa 90 maalmood ka hor intaadan qaadan tallaalka COVID-19. La hadal dhakhtarkaaga haddii aadan hubin daaweynta aad qaadatay ama haddii aad haysoto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka tallaalka COVID-19.
9. Tallaalka COVID-19 ma noqon doonaa mid khasab ah?
Shirkadaha loo shaqeeyo (Loo-shaqeeyayaal) oo badan ayaa go'aansanaya inay Khasab ka dhigaan tallaalka COVID-19, tusaale ahaan Guddoomiyuhu wuxuu Khasab kaga dhigay tallaalka COVID-19 shaqaalaha Gobolka Washington.Gobolka Washington hadda ma tixgelinaayo wax amar ah oo ku saabsan tallaalka, laakiin loo-shaqeeyayaasha ayaa u baahan kara. Caafimaadka Dadweynaha wuxuu kugula talinayaa inuu rumeysan yahay in tallaalka COVID-19 uu yahay mid nabdoon, wax ku ool ah, oo muhiim u ah ka-hortagga COVID-19, yareynta cudurrada, isbitaallada la dhigo, iyo dhimashada ay sabab u tahay COVID-19, isla markaana gacan ka geysato sidii loo joojin lahaa cudurkan faafa.
10. Tallaalka COVID-19 ma loo baahan doonaa safarka hawada?
CDC waxay ku talineysaa in dadka safraya ay ka fogaadaan dhamaan safarada aan muhiimka ahayn, waxayna wadaagaan hagitaan ku saabsan safarada gudaha ee Mareykanka Waxaad ka heli kartaa jawaabaha CDC su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan safarka halkan.
11. Maxaan sameyn karnaa si aan u ilaalino dadka aan weli is-tallaalin?
Dad badan oo jooga Deegaanka King ma tallaalna—oy ka midyihiin caruurta ka yar 5, kuwa leh difaaca jirka oo naaqusay, dadka wajaha caqabooyin marin, iyo degeyaasha aan ku kalsooneyn nidaamka daryeelka caafimaadka iyo/ama dawladda kadib markey la kulmeen midab-takoor ama waxyeelleyn.
Si loo ilaaliyo qofkasta oo bulshada ku jira, waxaa qaadan kartaa tallaalka (hadaad awoodo), la wadaag waxaad kala kulantay tallaalka dadka kale oo ka jawaab su'aalahooda, si dhaqsaa isku-baar kadib calaamadaha COVID-19 ama la-kulanka qof qaba, taageerna go'aamada dadka si ay naftooda u ilaaliyaan. Dadka aan tallaalneyn waa in ay sii wadaan raacidda hagitaanka gobolka Washington si fayo-qabka lagu dhawro laguna caawiyo ka hortagga faafka COVID-19.
12. Maxaan samayn karaa haddii aan waayo kaarka tallaalka?
"Diiwaanka Tallaalkayga" ee gobolka WA (MyIR) Ka raadi tallaalkaaga. Waad heli kartaa haddii aad Gashid MyIR (af Ingiriis) si aad u eegto diiwaanka tallaalkaaga, ka dibna daabac ama shaashadda sawir ka qaad. Haddii aadan lahayn akoonti (sanduuq), waxaad iska qori kartaa MyIR markii aad raabtid.
Adeegso nooca mobilada ee diiwaanka tallaalka gobolka WA, MyIRmobile (af Ingiriis) si aad u hesho shahaadada tallaalka. MyIRmobile wuxuu isbarbar dhigayaa diiwaannada ku saleysan magaca, dhalashada, taleefanka, iyo emaylka. Haddii mid ka mid ah goobahan ay maqan yihiin ama khaldan yihiin, ma awoodi doontid inaad la mid noqoto diiwaankaaga (ma awoodi doontid inaad gasho diiwaankaaga). Waxaad isticmaali kartaa muuqaalka sheekeysiga (waxaad qoraal ahaan kagala hadli kartaa) MyIR Mobile ama fadlan wac 833-VAX-HELP. Turjubaan waa la heli karaa.
Haddii aad ka qaadatay talaalka bixiyahaaga daryeelka caafimaadkaaga, xafiiska dhaktarka waa inuu ku siiyo diiwaankaaga.
Waxaad ku laaban kartaa goobtii lagaa tallaalay oo waxaad kaar cusub weydiisan kartaa maareeyaha xarunta. Waxaa laga yaabaa inay kuu sameyaan kaar cusub.
Tallaalka carruurta da'doodu tahay 5-11
1. Waa maxay sababtu ilmahaygu u qaadanayaan tallaalka?
Mararka badan kiisaska COVID-19 ee carruurta ma aha kuwo liita. Laakiin mararka qaarkood, COVID-19 waxa uu keeni karaa infekshanno halis ah oo u baahan in isbitaal la seexiyo. Xaaladaha qaarkood, cudurku wuxuu noqon karaa mid nafta halis gelinaya. COVID-19 hadda waa sababta 6-aad ee ugu badan ee dhimashada carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11 sano, nasiib darrose weli kor ayuu u kacaya. Carruurtu sidoo kale waxay la kulmi karaan dhibaatooyin caafimaad oo waqti dheer fayraska, oo loo yaqaan "COVIDka waqti dheer ku saameeyo."
Carruurtu maraky qaadaan fayraska waxay u gudbin karaan dadka kale, xitaa haddii kiiskooda uusan ahayn mid daran. Tani waxay ahaan kartaa walaac gaar ah marka carruurtu ay ku dhow yihiin dadka ku jira kooxaha khatarta sare leh, sida awoowayaasha iyo daryeelayaasha kuwaas oo laga yaabo inay qabaan xaalado caafimaad.
Marka carruurta la tallaalo, waxay difaacdaysaa bulshada oo dhan. Marka dad badan la tallaalo, fayrasku si sahal ah uma fidi karo waxayna yaraynaysaa suurtagalnimada in noocyo cusub oo fayras ah ay soo baxaan.
2. Qaab nuucee aayaa tallaalka ilmaha loogu tijaabiyay badbaadada iyo waxtarkiisa?
Tijaabooyin caafimaad oo ay ku lug leeyihiin in ka badan 3,000 oo carruur ah ayaa lagu sameeyay si loo qiimeeyo badbaadada iyo jawaabta celint difaaca ee tallaalka Pfizer ee kooxda da’doodu u dhaxayso 5-11. Si la mid ah waxa lagu arkay tijaabooyinka tallaalka dadka waaweyn, tallaalka carruurtu wuxuu ka badnaa 90% waxtar u leh ka hortagga cudurrada COVID-19 ee carruurta. Carruurtu waxay yeelan karaan xoogaa waxyeelo ah, sida cudud xanuun ama daal, laakiin daraasadda bukaan-socodka ma helin walaac ammaan oo halis ah. Khubaradu waxay soo gabagabeeyeen in faa'iidooyinka tallaalku ay aad uga miisaan badan yihiin khatarta uu u leeyahay carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano.
Si la mid ah tallaalada kale ee COVID-19, tallaalada carruurta ayaa sii wadi doona inay maraan la socodka badbaadada ugu degdega badan taariikhda Mareykanka. Kadib oggolaanshaha isticmaalka tallaalka carruurta u dhaxayso da’doodu 5-11, malaayiin carruur ah ayaa la tallaalay, mana jiraan warbixinno sheegaya waxyeellooyin halis ah.
3. Waa maxay nooca tallaalka caruurta loo heli karo?
Waqti xaadirkab, kaliya tallaalka Pfizer ayaa lagu oggolaaday Oggolaanshaha Isticmaalka Degdegga ah ee carruurta da'doodu tahay 5 ilaa 11. Tallaalku wuxuu ka kooban yahay laba cirbadood oo la bixiyo saddex toddobaad.
4. Tallaalka carruurtu ma mid la mid ahbaa tallaalka dadka da'doodu 12 iyo ka weyn?
Maya. Tallaalka Pfizer waxa si gaar ah loogu diyaariyey carruurta. Tallaalka Pfizer-BioNTech ee la siiyo dadka waaweyn iyo dhalinyarada looma isticmaali karo carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano. Carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 waxay helayaan qiyaas saddex-meelood meel ah waxa ay qaataan dhalinyarada iyo qaangaarka. Qadarka maaddada firfircooni waa 10 microgram oo loogu talagalay carruurta halkii ay ka ahayd 30 mikrogram ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadku waxay heli doonaan dhalooyin leh dusha sare ee orange-ka si ay u ogaadaan inay haystaan tallaalka saxda ah ee la siinayo carruurta yaryar.
5. Ma jiraa xiriir ka dhexeeya cudurka murqaha wadna xanuunka (myocarditis) iyo tallaalka carruurta? Intee in le'eg ayay khatartu tahay?
Kiisaska cudurka bararka ku dhaca muruqaha wadnaha (myocarditis) iyo bararka xuubka dibadda ee wadnaha (pericarditis) ayaa la soo sheegay ka dib tallaalka Pfizer COVID-19 ee dhalinyarada da'da weyn, da'doodu tahay 12-17 sano. Dareen-celintani waa naadir waxayna u badan yihiin ragga da'da yar. Guud ahaan, dadka ku dhacay xaaladahan waxay awoodeen inay si dhakhso ah u bogsadaan ka dib markii la daaweyay.
Tijaabada tallaalka bukaan-socodka ee carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11, ma jiraan wax kiisas ah myocarditis muddada saddexda bilood ah ee dabagalka tallaalka ka dib. Tijaabada caafimaadku way socotaa CDC iyo FDA waxay leeyihiin habab si ay u sii wadaan kormeerka iyo ogaanshaha falcelinta suurtagalka ah ama waxyeelooyin kale oo aan caadi ahayn.
6. Miyaan filan karaa in ilmahaygu uu ku dhici karo waxyeelooyin kale?
Ilmahaagu waxa laga yaabaa in cudud xanuun qabto, uu dareemo xanuun oo uu qandho ka qaado tallaalka COVID-19, oo la mid ah waxyeellooyinka tallaallada kale ee carruurta. Waxyeelooyinkan soo raaca waa ku meel gaar waxayna badanaa ku baxaan 1-2 maalmood gudahood.
7. Ma jiraan walaac xagga ilma dhalista/koritaanka ah oo ku saabsan tallaalka carruurta ka hor inta aysan gaarin qaan-gaarnimada?
Maya. Ma jiro wax caddaynaya in tallaal kasta, oo ay ku jiraan tallaallada COVID-19, ay sababi karaan dhibaatooyin bacrinminta ah oo dhedig ama lab ah. Malaayiin haween ah ayaa uur yeeshay kadib markii ay qaateen tallaalka COVID-19. Haweenka aan la tallaalin waxay halis sare ugu jiraan dhimashada ama dhimashada ilmahooda marka loo eego dumarka laga tallaalay COVID-19.
8. Waa maxay tallaalka ay tahay in ilmuhu qaato haddii uu 12 jirsado ka dib cirbadii kowaad ee tallaalka carruurta laakiin ka hor inta aan la gaadhin cirbadda labaad?
Si ka duwan daawooyinka kale, cirbadaha tallaalku waxay ku salaysan yihiin da'da ee maaha cabbirka ama miisaanka. Haddii ilmuhu da'diisu u dhexayso 11 ilaa 12 sano inta u dhaxaysa cirbadda kowaad iyo labaad, wa inuu cirbadda labaad noqotaa tallaalka Pfizer ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Si kastaba ha ahaatee, haddii ilmuhu uu qaato tallaalka Pfizer COVID-19 ee carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano cirbadda labaad, uma baahna inay helaan cirbadd dheeraad ah.